B. J Kamaal Galchuu: ''Ministira Muummee Dr. Abiy waliin Yugaandaatti mari'anne'' - BBC News Afaan Oromoo
Haala siyaasaa biyya keessa jiru hubachuun karaa nagaan biyyatti galee qabsaa'uu akka barbaadu dhaabni Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa beeksise.
Hayyudureen dhaabichaa Birgaader Janaraal Kamaal Galchuu BBC'tti akka dubbatanitti, jilli namoota jaha qabate guyyoota jaha booda Itoophiyaatti qajeela.
Haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiruufi marii mootummaa biyyattii waliin dhaabni isaanii taasiseen waan irra gahe ibsa guyyaa dheengaddaa dhaabichi baaseen biyyatti galuu akka barbaadu ibseera.
''Waan lama. Tokko karaa nagaatin hojjechuuf haalli baname jira. Lammaffaa qaama jijjiirama kanaan kan hin gammanne waan jiranif humna jijjiiramaa kana bira dhaabbachuu barbaanna,'' jedhan.
Jila adeemu keessa hayyu-dureen dhaabichaa keessatti hin argamani.
Yeroo jili deemuus dirree siyaasaafi dimookiraasii bal'isuuf mootummaa waliin mari'atama jedhaniiru.
Ministirri muummee Dr. Abiy Ahimad yeroo Yugaadaa daawwatan Birgaader Janaraal Kamaal waliin wal arguun mari'ataniiru.
Akka isaan jedhanitti mariin mootummaa waliin erga taasifamee booda torban lama gidduutti dhaabi biyyatti seena jedhaniiru.
Karaa nagaatiin hojjechuun waan hin dandenyeefii dhibbaan waan baay'ateef waggaa 12 dura Hagayya 2006 hidhataa 282 ta'an qabachuun gareen isaanii gara Ertiraatti akka qajeele himu.
Yeroo ammaa immoo haalli fooyya'aa waan uumamee jiruuf garuumoo hiddaan waan hin jabaanneef duubatti akka hin deebine gargaaruun waan barbaachisuuf murtee kana irra geenye jedhan turtii BBC waliin taasisaniin.
Birgaader Janaraal Kamaal Galchuun osoo Dargiin hin kufin dura jalqabee qabsoo keessa akka turan dubbatu.
Mootummaa amma aangoorra jiru keessattis kutaa waraanaa hedduu keessatti kan hirmaataniifi koorii afur biyyatti keessa ture keessaa ajajaa koorii tokko turani.
Gareen B. J. Kamaalin hogganamu Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) Ertiraa jiruutti waggaa 12 dura makamus waligalteen waan dhibeef waggaa muraasa booda dhaaba Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) hundeessuu isaanii himu.
Adda Tokkummaa Bilisummaa Oromoo akkasumas kan Fidoo jedhamu walitti fiduun immoo waggaa dura dhaaba Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa hundaa'uu isaa BBC'tti himaniiru.
Akka isaan jedhanitti mariin mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamu yoo tole biyyatti deebi'uun filannoo dhufuu irratti hirmaachuu feena jedhan.
Mariin mootummaa waliin taasifamu waggaa 4 dura eegale jedhan.
Mootummaan Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad dirree siyaasaa bal'isuuf jecha dhaabbilee maqaa ummataan biyya alaatti falman affeeren Addi Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) mariif biyya seenuun isaa ni yaadatama.